Inona ilaymarika na « entête » voalohany napetrany? - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Eto ary dia izao no marika na fitomboka na « entête » voalohany apetrany eto: “Ny Fanambaran’i Jesosy Kristy, izay nomen’Andriamanitra Azy”.Izany hoe ity boky Fanambarana ity izany dia Andriamanitra mihitsy no nanome azy an‟i Jesosy Kristy, izany hoe: izay olona rehetra mivavaka sy mino an‟io Andriamanitra io izany, dia tokony handray io hafatra io avokoa. Ka na iza na iza, no anarana hiantsoana an‟ilay Jehovah Andriamanitra, dia mitovy avokoa izany, ohatra:
– Dieu amin‟ny teny Frantsay,
– God amin‟ny teny Anglisy,
– Allah amin‟ny teny Arabo,
– amin‟ny teny Hebreo izy antsoiny hoe Elohim,
– ary amin‟ny teny Grika izy antsoiny hoe Théos.
Izany hoe io Andriamanitra io izany, no tompon‟ny fanambarana, ary io fanambarana io dia i Jesosy Kristy no nomena azy. I Jesosy Kristy izany dia antsoina ihany koa hoe mpaminany ato amin‟ny baiboly, fa ny hoe ny nomen‟Andriamanitra ny hafatra dia i Jesosy Kristy. Izany hoe ilay fanambarana izany, no nomena an‟i Jesosy Kristy dia i Jesosy Kristy izany no nitondra io fanambarana io.
Fa ahoana no nitondrany an’io Fanambarana io?
“ary naniraka ny anjeliny Izy hanambara amin’i Jaona mpanompony”, izany hoe:ilay fanambarana izany, dia niainga avy tamin‟Andriamanitra, dia nomeny an‟i Jesosy Kristy, ary i Jesosy Kristy indray naniraka ny anjeliny hanome izany an‟i Jaona.
Inona io fanambarana io?
Dia tsy inona izany fanambarana izany fa:” ny tenin’Andriamanitra sy ny filazana an’i Jesosy Kristy “, izay nampitaina tamin‟i Jaona, ary izay zavatra hafa ihany koa izay nampitaina tamin‟i Jaona.
Rehefa vita izany fanambarana izany, dia nanao sonia indray Ilay tompon‟ny fanambarana:
apokalypsy 1:4 – 5 «4 Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin’ny Fanahy fito izay eo anoloan’ny seza fiandrianany; [* Gr. eklesia] 5 ary avy amin’i Jesosy Kristy , Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin’ny maty ary Lehiben’ny mpanjaka amin’ny tany.”
Manao sonia ao ilay Jehovah Andriamanitra Ray izay fonosin‟ilay teny hoe Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, sy ny Fanahy Masina dia ilay Fanahy fito, sy i Jesosy Kristy, izay ambarany fa Ilay Lahimatoa amin‟ny maty ary Lehiben‟ny mpanjaka amin‟ny tany. Ary dia mbola miverina manao sonia ao ihany koa Izy (Jehovah), rehefa vita izay fampidirana izay ao amin‟ny andininy fahavalo :apokalypsy 1:8 « Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha. »
Izany hoe: mipetaka ao amin‟ilay marika famantarana na ny “entête” –n‟ilay taratasy daholo izany izay rehetra izay dia ny:
– Ny anarany (dia ny Tsitoha),
– ny momba Azy,
– ny niaviany,
– ny faharetan‟ny fotoana rehetra, (ankehitriny sy taloha ary mandrakizay).
Dia mazava ho azy izany, fa ity apokalypsy na fanambarana ity, dia tsy hevitra na fahendren‟i Jaona na fahalalan‟olombelona, na asa soratra literatiora fotsiny ihany, fa tena tenin‟Andriamanitra mihitsy, ary izy amin‟ny maha-Andriamanitra Azy mihitsy, no nampanoratra azy arakaraky ny anarany, araka izay hiantsoan‟ny firenana rehetra Azy, Izy no Tompon‟ny hafatra araka izay hita ao amin‟ny teny fampidirana na “introduction” io. Mbola ho azontsika sy ho hazavaina eto avokoa ary ho raisina daholo io fanazavana mahakasika an‟Ilay Tompon‟ny hafatra io, fa mbola mila apetraka tsara aloha ny marika sy ny fitomboka na ny “entête” rehetra, vao afaka miroso amin‟ny tena fanazavana isika.
Hiezaka ary isika hamantatra an‟Ilay Tompon‟ny Fanambarana. Hijery an‟i Jesosy Kristy ary isika satria: raha vao manomboka ny fitarihanteny ao amin‟ny boky fanambarana, dia efa voasoratra ao sahady ny hoe: “fanambaran’i Jesosy Kristy….” Ka ny fanontaniana ary dia ny hoe : “iza marina moa ity Jesosy Kristy izay tompon‟ny hafatra ity?” satria tsy mahatsara antsika ny mihinan-kena tsy fantatra, na mihinana ambolony fotsiny ihany.